DAAWO: M/weyne Deni, maxay tahay sababta la qariyey ee ugu socdaalay Itoobiya & Imaaraatka Carabta, maxaa qarsoon?
October 26, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 5
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa markale u socdaalay dalalka Itoobiya & Imaaraatka Carabta maalmo uun markii uu dib ugu laabtay Garoowe, waxaana safarkiisan waqtigan uu yahay mid kusoo beegmay xili ay Soomaaliya ku jirto marxalada diyaar garowga doorashooyinka loo madlan yahay in ay dhacaan sannadka 2021-ka bilowgiisa.
Macluumaad aan ka helnay safarka Madaxweyne Deni ee Itoobiya ayaa ah in uu halkas kulamo kula yeelan doona saraakiisha Sirdoonka ee dalkaas oo saameyn ku leh arrimaha doorashooyinka ee dalka, waana kulankii 2aad oo ay yeelanayaan marka laga reebo kii ay horey u wada yesheen markii uu tartamayay xilka Madaxweyne-nimada Puntland bishii December bilowgeedii.
Xogtu, waxay kaloo cadeynaysaa in ay halkaas isku arki doonaan Xubno sare oo katirsan Nabadsugidda Soomaaliya, oo aysan isku fiicneyn mudooyinkii u dambeeyey, waxaana u kala dab-qaadayay xubno katirsan Sirdoonka Itoobiya iyo sidaas oo kale garabyo kale oo siyaasadeed.
Wada xaajoodyo qaadan doona 2 maalmood ayaa ka dhici doona Addis Ababa, wuxuuna 27-ka bishan u gudbayaa Siciid Deni dalka Imaaraatka Carabta, halkaas markale ayaa looga yeeray waana qorshaha la xariira Doorashooyinka Federaalka oo ay Xukuumadda Imaaraatka Midowbay doonayso in ay saameyn ku yeelato waqti xaadirkan.
Madaxweyne Deni dhawaan ayuu wada hadal kula yeeshay wakiilada Imaaraatka Carabta u qaabilsan howlaha doorashooyinka Soomaaliya, laakiin damaciisa ku wajahnaa doonistiisa ayaa ahaa mid ay saluugeen Imaaraatka oo u arkayay in uusan waqti xaadirkan aheyn mid soconaya.
Sidaas oo kale Deni ayaa ugu dambeyntii loo ogolaaday in uu qiimeyn ku sameeyo dhinacyada ku shirsanaa Nairobi, isagoo halkaas intii uu joogay wada xaajoodyo gaar ah la yeeshay dhinacyo kala duwan, marka laga yimaado kooxdii ay wada tageen Imaaraatka Carabta.
Xog kale oo aan ka helnay wada hadalo gaar ah oo 2 habeen kahor dhexmaray Madaxweynaha Puntland Siciid Deni & Xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha Wakiikada ayaa daaha ka rogaysa macluumaad cusub oo muujinaysa in markale uu soo labo-kacleeyey doonista Madaxweyne Deni ee kuwajahan xilka u sareeya Madaxtinimada Soomaaliya.
Ilo wareedyo ka qeybgalay kulanka ayaa noo xaqiijiyey in Madaxweyne Deni Afkiisa ay kasoo baxeen mar la weydiiyey damaciisa doorashada iyo xaaladdaha ka jira “Waxaa jira fursad weyn oo muuqata oo u bahan in laga faa’iideysto, waxayna u baahan tahay Latashi badan iyo Shaqo adag oo la qabto si aan u gaarno guushaas oo hadda muuqata” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Madaxweynuhu ma bixin faahfaahin dheeraad ah, taas oo markale hoosta ka xariiqaysa in uu bananka u soo baxayo damaciisa ku wajahan Madaxweyne-nimada Soomaaliya ama ugu yaraan in uu maalmaha u dambeeya qiimeeyo marxaladdaha doorashada, xili ay soo baxayan macluumaad kale oo sheegaya in uu tageero dhaqaale ka raadinayo Imaaraatka Carabta oo uu markale hadda u laabanayo.
Dadka la socda ama odorasa dhaqdhaqaaqyada siyaasadda ayaa rumeysan in Madaxweyne Deni wajahayo maalmo adag oo siyaasadeed, Haddii uu go`ansado musharaxnimadiisa Heer Federaal oo uusan guuleysan ayay ku tahay dhabarjab weyn oo siyaasadeed, sidaas oo kale cabsida taagan ayaa noqon karta sharuudaha Guddiga doorashada Madaxweyne-nimada soo jeedin doonaan oo ka galaafan karta xilka uu hadda hayo.
Laakiin xubno aad ugu dhaw ayaa cadeynaya in ay suuragal tahay in go`aan uu qaato Madaxweynaha Puntland marka la gaaro doorashada Gudoonka baarlamaanka Faderaalka, taas oo ay jiraan dhinacyo badan oo ka shaqeynaya in saami-qeybsiga beelaha Soomaalida ee hadda wax laga bedelo sida ay u qaybsadaan kuraasta sare.
Waxaa yaab leh arrimaha sidaa xasaasiga u ah sidee lagu helay xogtooda? Ma Deni baa soo dusiyey mise kuwii uu la shiray? Maxay ka wadahadlayaan Deni iyo sirdoonka Farmaajo? Sow lagama heshiin arrimihii doorashada; maxaa dhimmanaa?
U maleynmayo in in Itoobiya ka takhalusayso Farmaajo; laga yaabee in qiyaaseen inuusan rajo soo noqosho lahayn. Haddii ay Deni ugu yeereen inay taageerayaan murashaxnimadiisa waa haddii ay doonayaan inay ogaadaan mowqifkiisa ku aaddan dekadihii Farmaajo u saxiixay ciidan badeed oo Itoobiya yeelan doonto. Deni iyo murashax kasta oo kalena ma taageerayaan ilaa uu ballanqaadkaas sameeyo.
Tan kale inkastoo iyaguba labo jeer oo isku xigta soo qabteen xilka madaxweynaha, haddana, Hawiye raalli ma ku noqon doonaan in nin Daarood ah mar kale qabto jagada madaxweynaha? Ma dhici kartaa in Deni heshiis la galay Mudullood una ballanqaaday jagda ra’iisalwasaareha haddii uu guuleysto?
Imaaraadka iyo Itoobiya waa ka siman yihiin waana isku mowqif damacooda ku aaddan dhulka Soomaaliyeed iyo baddiisa.
Haddii Deni damac ka hayo xilka dalka ugu sarreeya inuu isu sharaxo, waxaan filayaa inuu kala tashaday reer Puntland, haddiise uu keligi nitooxsaday … haddii wadaantu ka dillaacdo hadhow, haybaddiisa iyo magaciisu kama soo kaban doonaan, reer Puntlandna qiime dhinacyo badan iyo maaliyad baahi badan loo qabo ayey ugu kici doontaa.
waxa qoraalkaan lagu sheegay waa wax telefoon lagu dhameen karo. uma baahna in safar iyo saxariir loo maro.
Deni ma u tartamayo madaxweyne Somalia,waxase Itoobiya ugu yeedhay siday ugu qancin lahaayeen inuu taageero soo laabashada Farmaajo,waa hadii Itoobiya leedahay go’aan u gaar ah,hadiise ay Wakiil u tahay Imaaraatka waxa laga yaabaa in la weydiinayo aragtidiisa murashaxiinta miiska u saaran Itoobiya.
Hadii Kenya iyo Itoobiya dhanka Imaaraatka u wareegaan Farmaajo rajo ma leh,waxase Itoobiya lagu ogaa taageerada Farmaajo.
Maamulka Pudhlayn oo lacagtii foojariga ahayd ee ay daabaceen oo Dollar ah soo geliyay Somaliland iyo ciidanka Booliska oo gacanta Ku dhigay,soona bandhigay,lacagtaas oo hal milyan oo Doolar foojari ah,raggii sitayna maxkamada ayaa la geynayaaa Insha-allaah
Mooryaanta umadda soomaaliyeed raba inay dhacaan waa cadaatay inay Puntland tahay,waxana lagu wargelinayaa CIA-da USA,si ay tallaabo u qaadaan,hawl-galna ka fuliyaan xarumaha Puntland Ku daabacdo lacagaha Dolarka & Shilling Soomaaliga ah ee been abuurka ah.
Horena gabadh sidata $100.000 oo Puntland ka timi ayaa kantaroolka Burco loogu qabtay.
Deni safaarada Maraykanka ayaa u yeedhay,si loogu sheego joojinta lacagta maraykanka ee foojariga ee ay daabacaan,rabaana inay Ku dhacaan soomaalida iyo geeskaba.
PUNTLANDTIMES RUN BADANAA,WAXAN ISLAHAA WAY DACAAYADAYNAYAAN MARKAY QORI JIREEN IN PUNTLAND DAABACDO LACAG FOOJARI AH.
Waa hoyga beenta website-kan C/weli Gaas, arimahan haday jiraan maba la ogaadeen waayo waa sir hoose, waa like iyo subscribe oo nooc kale loo bedelay, wuxuu rabaa qoraagu dadkaa badan ee page-ka soo booqanaya si xoogaa lacag ah uga helo qolada xayaysiinta.